Famolavolana famolavolana - Ningbo Runner Co., Ltd.
FAHAIZANA R & D
Ningbo Runner dia manana ekipa matihanina miaraka amin'ireo injenieran'ny R&D maromaro tafiditra amin'ny sehatry ny fanadiovana ara-pitaovana vaovao, famolavolana indostrialy, famolavolana bobongolo, fifehezana mandeha ho azy, famakafakana fitsapana ary fitantanana tetikasa, manome fanohanana lehibe ho an'ny fanavaozana tsy miankina WRN sy zava-bitan'ny teknolojia.
Miantehitra amin'ny ekipa R&D matanjaka sy traikefa manankarena amin'ny fampandrosoana sy ny famolavolana ny vokatra, ny famokarana vokatra sy ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny orinasa dia afaka mihaona amin'ny mpanjifa sy tsena tsaratsara kokoa.
FAHAIZANA Drafitra TSY MISY TANINDRAZANA
Ny ekipa mpamolavola indostrialy dia mamokatra asa tsara maro miaraka amin'ny kalitaon'ny endrika matihanina isan-taona. Ny ekipa dia manome ny mpanjifa andian-dahatsoratra famolavolana vokatra avo lenta amin'ny alàlan'ny paikady toy ny tetikadin'ny tetik'asa, ny fikarohana ny hevitra, ny famolavolana ny vokatra, ny vahaolana, ny indostrialy, ny fanatsarana ny famokarana, ny fonosana vokatra ary ny fifandraisana amin'ny maso. Mandritra izany fotoana izany dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny ekipa mpamorona indostrialy any Allemà, Suède, Hong Kong ary Taiwan izy ireo hampihatra hatrany ny teknolojia vaovao sy ny famolavolana hevitra amin'ny vokatra vaovao.
VAHAOLANA MOMBA NY SISTEMA MAHAY INDRINDRA
Fitsidihana raharaham-barotra, angon-drakitra momba ny tsena ary fanaovana tatitra momba ny famotopotorana, mijanona eo alohan'ny mpanjifa ny mpihazakazaka ary manampy azy ireo hizaha fahafaha-manao asa vaovao sy hamolavola vokatra vaovao. Mino izahay fa na inona na inona fanovana amin'ny ho avy, ny fahaizantsika manatanteraka, ny fanavaozana ary ny fahaizantsika manao fikarohana, no làlana arahinay, "fahombiazan'ny mpanjifa" no tanjonay farany.